Xiisad U Dhexaysa Maamulada Galmudug iyo Ahlusuna Oo Ka Taagan Gobolka Galgaduud
August 25, 2017 - Written by Kulmiye
Gurmadkii labaad oo ka ruqaansaday Magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug, ayaa gelinkii dambe ee Khamiistii gaaray Degmada Cadaado ee Gobolka Galgaduud, xilli dhiilo colaadeed ay ka taagan tahay gobolkaasi. Gurmadkii hore ee Gaalkacyo ka yimid, ayaa Talaadadii gaaray Degmada Cadaado.
Gurmadkan ciidan oo boqolaal askari lagu sheegay, ayaa waxay Cadaado soo gaareen, iyagoo wata gaadiidka waaweyn ee dagaalka, sida ay soo sheegayan Suxufiyiinta ku sugan Cadaado.
Wararka, ayaa sheegaya in ciidankan ay ku wajahan yihiin Deegaanka Godinlabe, oo ay ku sugan yihiin ciidan kale oo taabacsan Maamulka Galmudug, iyadoona ay Galmudug qorsheynayso weerar ka dhan ah Magaalada Dhuusamareeb.
Ilo wareedyo, ayaa sheegaya in Madaxweynaha Galmudug, Axmed Ducaale Geelle (Xaaf) uu Khamiistii shir isugu yeeray Saraakiisha Ciidamada, isagoona ku amray inay u diyaargarowban duulaan ka dhan ah Dhuusamareeb.